Waddamada Reer Yurub Oo Hanjabaad Culus U Diray Turkiga, Sababta Iyo Tallaabooyinka Ay Ku Curyaaminayaan Erdogan Ee Ay Damacsan Yihiin - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWaddamada Reer Yurub Oo Hanjabaad Culus U Diray Turkiga, Sababta Iyo Tallaabooyinka Ay Ku Curyaaminayaan Erdogan Ee Ay Damacsan Yihiin
Waddamada Reer Yurub Oo Hanjabaad Culus U Diray Turkiga, Sababta Iyo Tallaabooyinka Ay Ku Curyaaminayaan Erdogan Ee Ay Damacsan Yihiin
Brussels (Jigjigaonline) – Midowga Yurub ayaa ku hanjabay in uu cunaqabatayn ku soo rogi doono dalka Turkiga, waa haddii uu sii wado “qodidda sharcidarrada ah” ee shidaalka iyo gaaska dabiiciga ahi ee uu ka wado meel u dhow biyaha dalka Qubrus ee barigga badda Mediterranean-ka.
Hanjabaadan ayaa timid xilli uu shir Midowga Yurub uu uga socdo magaalada Brussels ee dalka Belgum.
Madaxa golaha Midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa tallaabada uu Turkiga qaaday ku tilmaamay “mid gebi ahaanba aan la aqbali karin”.
Turkiga ayaa khamiistii la soo dhaafay Qubrus u diray markab labaad oo ah kuwa lagu qodo ceelasha shidaalka.
Jamhuuriyadda Qubrus ayaa xubin ka ah Midowga Yurub balse woqooyiga Qubrus oo ka go’day jamhuuriyaddaasi ayaa gacansaar weyn la leh dalka Turkiga.
Golaha Midowga Yurub oo ay ku mideysan yihiin hoggaamiyeyaasha waddamda reer yurub ayaa Turkiga ugu baaqay in uu joojiyo arrintaasi isla markaana uu ixtiraamo madaxbannaanida dhuleed ee Qubrus.
Warbixin qoraal ah oo laga soo saaray kulanka reer Yurub ee Brussels ayaa lagu sheegay in “golaha reer Yurub uu ansixinayo baaqa ku wajahan guddiga reer Yurub iyo wasaaradaha arrimaha dibadda ee waddamada reer Yurub ee ah in ay soo hindisaan tallaabooyinka ugu habboon sida in la qaado tallaabooyin leh bartilmaameed cayiman.”
Dalka Turkiga ayaa ah dalka kaliya ee aqoonsan Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Qubrusta Turkiga ee woqooyiga, taa oo ka takooran dunida inteeda kale.
Turkiga ayaa sheegay in ceelashaasi shidaalka uu ka qodayo gudaha dalkiisa, si waafaqsan shuruucda caalamiga ahi.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in markab laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Faatix uu tan iyo bishii shanaad ee sanadkan ku sugnaa galbeedka Qubrus isla markaana uu haatan billaabay in uu qodo ceelal shidaal oo ku yaal badda Mediterranean-ka.
Turkiga ayaa doonaya in uu ku biiro Midowga Yurub balse wadaxaajoodyada arrintaasi ku saabsan ayaa hakad galay.
Guddiga Midowga Yurub ayaa sheegay in dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ka baxday ballanqaadyadii ahaa in ay wax ka qabaneyso arrimaha caddaaladda dalkaasi iyo sareynta sharciga.
Dowladda Turkiga ayaa gacan bir ah ku qabatay laamaha dowladda ee dalkaasi tan iyo markii uu dhacay inqilaabkii dhicisoobay ee sanadkii 2016, kaa oo la doonayay in xukunka looga tuuro madaxweyne Erdogan.
Ra’iisalwasaaraha Giriigga Alexis Tsipras ayaa sheegay in hanjabaadda Midowga Yurub ay ku wajahan tahay shirkado iyo shakhsiyaad, ayna tahay mid Midowga Yurub uu ku xayirayo hantida shakhsiyaadkaasi iyo shirkadahaasi, arrintaa oo ay ka dhalan doonto cawaaqib dhanka dhaqaalaha ahi.
“Tallaabooyinkan ayaa la qaadi doonaa haddii Turkigu uu joojin waayo hawlaha sharcidarrada ah ee uu ka wado aagga dhaqaale ee Qubrus,” ayuu Brussels ka sheegay ra’iisalwasaare Alexis Tsipras.
Turkiga oo ka tirsan gaashaanbuurta Nato oo isla markaana xulufo la ah waddamada reer galbeedka ayaa waxa uu ganacsi weyn kala dhaxeeyaa waddamada reer Yurub, walina sida Ruushka oo kale lama uusan kulmin wax xayiraado ah oo uga yimid dhanka reer Yurub.
Mareykanka ayaa mar sii horreysay xayiraado ugu hanjabay Turkiga haddii madaxweyne Erdogan uu ku adkeysto in uu hannaanka difaaca gantaalada ee S-400 uu ka iibsado dalka Ruushka.
Somaaliya: Shan Ruux Oo Ku Dhintay Dagaal-beeleed Ka Dhacay Hiiraan